Madaxweyne Siilaanyo Iyo Ambassador Mahinga Oo Kulan Albaabada Loo Xidhay Kusoo Qaaday Ka Qaybgalka Somaliland Ee shirka Dalka Turkiga Iyo Arrimo Kale | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Madaxweyne Siilaanyo ayaa kulan albaabadu u xidhan yihiin kula yeeshay saaka xafiiskiisa Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaalida Augustina Mahinga, kaaso oo booqasho ku yimi shalay Somaliland. Kulankaa oo saacado baddan qaatay ayaa la ogayn
waxyaabaha laga hadlay, iyadoo aanay saxaafadu goob joog ka ahay, balse kulankaa ka dib qoraal saxaafada loogu talo galay ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Somaliland iyo Mahinga kulankooda kaga wadahadleen shirka la filayo in horaanta bisha June ee sanadkan lagu qabto dalka Turkiga, kaas oo Mahinga sheegay inuu ahmiyad weyn u leeyahay Somaliland.
Sidoo kulankaa ayaa lagaga hadlay sida lagu sheegay qoraalka saxaafada loo qaybiyay arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka somaliland iyo arrimo kale.
Qoraalka xafiiska Madaxweynaha kasoo baxay oo uu ku saxeexanyahay Af-hayeenka madaxtooyada Somaliland C/llaahi Daahir Cukuse ayaa u qornaa sidan:- “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka gaarka ah ee Xog-hayaha guud ee Qaramada midoobay u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya, Mr, Augustine Mahiga oo booqasho laba meelmood ah ku yimid dalka.
Ugu dambayntii waxa uu tilmaamay muhiimada uu leeyahay shirka ka dhici doona magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga, horaanta bisha June ee sanadkan, isagoo ku dhiiri geliyey inay Somaliland ka qayb gasho shirkaas, oo ah mid waxku ool ah.” ayaa lagu yidhi qoraalka.
Dhinaca kale warar kale ayaa sheegaya in Mahinga uu Madaxweynaha Somaliland kala hadlay hakadka ku yimi wadahadaladii Somaliland iyo Somalia oo ay beesha caalamku danaynaysay. Kadib markii ay Somaliland ka cadhootay xubno dawladda Sh. Shariif kusoo dartay gudida ay dhinaceeda kasoo magcawday oo kasoo jeeda deegaanka bariga somaliland, kuwaas sababay inay Somaliland hakiso qorshihii wadahadlada oo la filayay inay dhinac ku kulmaan London, maalmaha soo socda.
Laakiin qoraalka kasoo baxay Madaxtooyada laguma sheegin inay Mahinga iyo Madaxweyne Siilaanyo isla meel dhigeenxal u helida arrintaa. Sidoo kale ma cada inay xukuumadda aqbashay inay ka qaybgasho shirka arrimaha Somalia ee ka dhacaya dalka Turkiga iyo in kale.